Jimicsiyada jimicsiga hawada: sida loo sameeyo, faa'iidooyinka, tilmaamaha iyo inbadan! | Ragga Stylish
Jimicsiga jimicsiga looma waayi karo ajandahaaga. Waana in loo hibeeyo dhawr saacadood asbuucii waxaa loo arkaa inay lama huraan tahay in jir ahaan iyo maskax ahaanba jir ahaan loo waafajiyo.
Ogow jimicsiyada jimicsiga jirka, sida loogu dhaqmo, maxay yihiin dhammaan faa'iidooyinkooda iyo kuwa kale waxyaabaha aad u baahan tahay inaad ogaato ka hor intaadan ku darin tababarkaaga:
1 Liiska jimicsiga jimicsiga
1.3 Mashiinnada jimicsiga
1.4 Baaskiil wadista
2 Tababar joogto ah ama kala-guur?
3 Faa'iidooyinka tababarka iskutallaabta
4 Faa'iidooyinka jimicsiga jimicsiga
6 Isku dar jimicsi xoog leh
Liiska jimicsiga jimicsiga
Jimicsiga jimicsiga waxaa lagu gartaa kiciya garaaca wadnaha iyo xawaareynaya neefsashada waqti dheer (ugu yaraan 30 daqiiqo). Sidan oo kale, si ka duwan anaerobic, jimicsiga noocan ah wuxuu u baahan yahay tamar joogto ah. Jidhku wuxuu tamartaan ka helaa dufanka, oksijiinta, iyo karbohaydraytyada.
Orodku waa jimicsiga jimicsiga ugu caansan. Waxaa laga yaabaa sababta oo ah waxaa lagu samayn karaa ficil ahaan meel kasta ama si fudud sababtoo ah runti waa wax la qabatimo. Inaad ka tagto qaab nololeed aan fadhiyin oo ka dambeeya way adkaan kartaa, laakiin mar alla markii lagaa helo, arrinta khiyaanada ah waxay socotaa adiga oo aan 30 daqiiqo (ama ka badan) ee socod maalinle ah.
Si layligan loogu dhaqmo, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad haysatid kabo ku habboon. Haddii masaafada shaqada ay kugu filan tahay, waad lugeyn kartaa sidaasna waxaad uga faa'iideysan kartaa safarka si aad jimicsi jimicsi ah u sameyso. Waxaad ku socon kartaa banaanka (baadiyaha iyo magaalada labadaba), laakiin sidoo kale lugta lugta. Si aad waxtar u yeelato waxaa muhiim ah inaad hubiso in garaaca wadnahaagu uu kordho. Halkaas ku gaadho adoo khafiifaya xawaarahaaga iyo fuulitaanka meelaha dhaadheer.
Baaskiilada Elliptical, baaskiil jimicsi, treadmill ... Jimicsiyada jimicsiga waxay bixiyaan fursado badan oo wanaagsan layli jimicsi oo gudaha ah. Waa fikrad fiican in laga gabbado dhaxanta iyo roobka xilliga qaboobaha.
Baaskiil wadiddu waa jimicsi jimicsi oo weyn. Laakiin socodka fudud waxaa laga yaabaa inuusan ku filnayn inuu helo heerka garaaca wadnaha ee aad u baahan tahay. Xawaaraha si dhakhso leh ama u maro meelaha dhaadheer. Haddii neefsashadaadu ay tartameyso waxay ka dhigan tahay inaad si fiican u shaqeyneyso.
Haddii jilbahaagu aysan ku fiicnayn orodka, tixgeli dabaasha. Sababta ayaa ah qulqulaya biyaha ayaa ka roon kala-goysyada marka loo eego laami adag.
Tababar joogto ah ama kala-guur?
Tababbarka isdaba jooga ah waa mid sii wadaya isla heerka dadaalka illaa 20-60 daqiiqo oo aan nasasho lahayn. Taa bedelkeeda, tababbarka bareeggu wuxuu beddelayaa ficillo firfircoon iyo soo kabasho firfircoon. Haddii ay qaataan qaab jaantus ah, habka joogtada ahi wuxuu noqon lahaa xariiq toosan, halka habka udhaxeeya uu sharxi lahaa taxano taxan.
Waxaa loo tixgeliyaa taas, iyada oo ay ugu wacan tahay xaqiiqda ah in xoogagga la cusboonaysiiyay inta u dhexeysa dadaallada, tababarka bareegyada waad sii shaqeyn doontaa, sidaa darteedna horumar badan ayaa la sameeyay. Tusaale waa orodka saddex daqiiqo, socodka hal daqiiqo, iyo soo noqoshada. Waxaad sidoo kale jaangoyn kartaa mudada u dhexeyn kasta oo ku saleysan dareenkaaga waqti walba.
sidoo kale, nasashada jimicsiga dheer waxay ka hortageysaa laylisyada jimicsiga inay noqdaan anaerobic. Tani waa sababta oo ah waxay u oggolaanayaan garaaca wadnaha inuu ku soo laabto aagga hawada.
Faa'iidooyinka tababarka iskutallaabta
Maxaad naftaada ugu koobeysaa mid keliya markii aad wada heli karto dhammaantood? Tababbarka iskutallaabta ama iskutallaabta iskutallaabta ayaa isku daraya laylisyo jimicsi oo kala duwan. Tusaale ahaan, dabbaasha Isniinta, baaskiil wadista Arbacada iyo orodka jimcaha.
Tababbarka iskutallaabtu wuxuu caawiyaa inuu shaqeeyo murqaha badan iyo jihooyinka badan. Sidan oo kale, tababar dhameystiran ayaa lagu gaarayaa iyadoo laga hortagayo dhaawacyada. Sidoo kale, maadaama ku celcelinta jimicsi isku mid ah had iyo jeer u muuqato mid kali kali ah, waxaa loo tixgeliyaa inay kaa caawineyso inaad dhiirigelinta sare u hayso.
Faa'iidooyinka jimicsiga jimicsiga
Jimicsiga jimicsiga ayaa kaa caawinaya inaad sii noolaato muddo dheer oo ka sii wanaagsan. Waana inay saameyn togan ku leedahay dhinacyada muhiimka ah ee caafimaadka. Marka lagu daro jimicsiga aad dooratay qaab nololeed caafimaad leh ayaa kaa caawin doona:
Kahortaga cudurada (buurnida, dhiig karka, nooca sonkorowga 2aad ...)
Maamul cudurada daba dheeraada (dhiig karka, heerarka sonkorta dhiigga oo sareeya ...)
Iska yaree heerarka kolestaroolka xun (LDL) iyo kor u qaadista kolestaroolka wanaagsan (HDL)
Dib udhaca garashada
Hagaajinta niyadda oo hagaajiso xaaladaha maskaxda qaarkood, sida niyadjabka iyo walwalka
Inaad dareento dhammaan faa'iidooyinkeeda, waxaa lagugula talinayaa inaad ku deeqdo labada jeer inta jeer ee jimicsiga. Fikrad ahaan, waa inaad sameysaa jimicsi jimicsi maalmaha ugu badan ee usbuuca. Dhinaca kale, aad ayey muhiim u tahay in lagu daro maalmaha nasashada si looga hortago waxyeelada foosha xun ee tababarka.
Isku dar jimicsi xoog leh
Ka shaqeynta joogtada ah abuurista iyo xoojinta muruqyada (squats, riix-ups, qaadista culeyska ...) waa fure u ah jir dhiska guud ahaan ka wanaagsan.
Isku dar jimicsiga xoogga leh jimicsigaaga jimicsiga (waxay noqon kartaa isla maalin ama maalmo kala duwan). Xoojinta muruqyadaada ayaa kaa caawin doonta inaad daahiso bilowga daalka kana hortagto dhaawacyada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Aerobics